मानिसलाई किन निद्राको आवश्यकता पर्छ? - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७६ भदौ १० गते २०:२२
निद्राबारे अनुसन्धानकर्ताहरुले निकालेका निष्कर्ष हुन्, माथिका यी पंक्ति। गत १० वर्षमा निद्राबारे थप जानकारी बाहिर आएका छन्। विदेशतिर निद्रा लाग्ने औषधिहरुको धेरै प्रयोग हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। अमेरिकामा काम गर्ने डाक्टरहरु भन्छन्, ‘बिरामी आफैंले निद्रा लाग्ने यो औषधिको प्रेसक्रिप्सन लेखिदेऊ भन्छन्।’
राम्रो स्वास्थ्य र दीर्घायू जीवनको लागि ७ देखि ८ घन्टा सुत्नु आवश्यक मानिन्छ। उमेरअनुसार केटाकेटीमा निद्राको आवश्यकता बढी र वृद्धवृद्धामा कम हुन्छ। सोधकर्ताहरुले किन कम सुत्नु हुन्छ? भनेर धेरै जनालाई प्रश्न गर्दा मुख्यतः तीन वटा यस्ता कारण दिइन्छ।
– स्लिप एपनियाः निदाइरहेका बेला श्वास फेर्ने क्रम ढिलो ढिलो हँुदै अचानक थोरै समय रोकिन्छ र व्यक्ति जाग्छ। निद्रा खल्बलिन्छ र यही क्रम दोहोरिन्छ। घुरेर सुत्ने व्यक्तिमा यस्तो समस्या हुनसक्छ।